Awona maqhinga asebenzayo okusebenzisa iXiaomi Mi A1 | I-Androidsis
Awona maqhinga aphezulu eXiaomi Mi A1
UEder Ferreño | | Ukukopela kwe-Android, Tutorials, Xiaomi
UXiaomi uye waba yenye yezona zinto zibalulekileyo kwintengiso. Ngaphandle kwento yokuba kude kube kutshanje bathengisa kuphela e-Asia, babekwa njengezona zithengiswa kakhulu kwihlabathi liphela. Ngoku baqala ukuthengisa kwiimarike ezintsha, ukuthengisa kwabo kuya kuqhubeka nokwanda. Inkqubo ye- ukumiliselwa kwezixhobo ezinje ngeXiaomi Mi A1 Kuyanceda.
Yifowuni ebaluleke kakhulu kwifemu. Kuba imalunga ne- Okokuqala ukuba ne-Android One. Ke ifowuni iyishiya i-MIUI kwaye ivula i-Android emsulwa. Umzuzwana onokuba sisitshixo kwinkampani. Ke, Sishiya amaqhinga amahle ale Xiaomi Mi A1.
Un Ifowuni enezinto ezininzi ezinokuthi zifanelwe ukusetyenziswa ngokupheleleyo. Kungenxa yoko le nto sikulethela uthotho lwamaqhinga ukuze ufumane uninzi lwale Xiaomi Mi A1. Ukulungele ukudibana nabo?
1 Sebenzisa ifowuni yakho njengolawulo olukude
2 Sebenzisa izijekulo zomzimba
3 Tshixa ii -apps ngenzwa yeminwe
4 Sebenzisa irediyo ye-FM
5 Guqula uxinano
6 Icebo elongezelelweyo
Sebenzisa ifowuni yakho njengolawulo olukude
Kungumsebenzi onomdla kakhulu apho sifuna isicelo kuwo. Ngaba unako guqula isixhobo silawule kude kude esinokuyisebenzisa nasiphi na esinye isixhobo. Ukusuka ekutshintsheni amajelo kwiTV ukuya kunyusa umthamo wesinye isixhobo. Ke kunokuba luncedo kakhulu.
Kwanele nge khuphela usetyenziso olubizwa ngokuba yiMi Remote. Enkosi kuyo, inzwa ye-infrared yeXiaomi Mi A1 ithathiwe ithuba kwaye yiyo loo nto sijika esi sixhobo saba ulawulo kude ngendlela elula kakhulu.
Mi isilawuli kude-seTV, STB, AC nangaphezulu
Sebenzisa izijekulo zomzimba
IPodemos Sebenzisa isivamvo somnwe wale Xiaomi Mi A1 kwizinto ezininzi. Kwabaninzi ngaphezulu kunokuba sicinga. Kuba ngokungathandabuzekiyo yindlela yokwenza izijekulo. Singabonisa ibha yesaziso. Slayida nje umnwe wakho ezantsi kwaye uza kuvela ngqo. Ukwenza olu khetho kufuneka ufikelele kwifayile ye useto kwaye ukhethe ukhetho lokuswayipha lwezaziso. Ngale ndlela ungasele uyonwabele.
Tshixa ii -apps ngenzwa yeminwe
El Inzwa yefowuni yeminwe ingasetyenziselwa izinto ezininzi njengokuba sele sikuxelele. Enye yezona zinto ziluncedo kakhulu vala okanye uvule ii -apps. Ukwenza oku, kufuneka sifake isicelo esivumela ukuba senze oku ngendlela elula. Kukho uninzi lweapps ezikhoyo ukubhloka iiapps. Kodwa, ukuba into esiyifunayo kukusebenzisa isivamvo zeminwe ukuvala apps, Olunye ukhetho olufanelekileyo lokufaka kwiXiaomi Mi A1 yiAppLock.
Sebenzisa irediyo ye-FM
Este IXiaomi Mi A1 ayinayo irediyo ye-FM, nangona oku kungengxaki, kuba kukho indlela yokukwazi ukumamela irediyo ye-FM ngaphandle kokufuna ingcambu okanye ukusebenzisa idatha yeselfowuni. Yi uthotho lwamanyathelo alula kakhulu kodwa kuthiwani ngathi makonwabele unomathotholo:
Sivula usetyenziso lwefowuni
Faka ikhowudi * # * # 6484 # * # *
Imenyu iyaphuma kwaye siyilayida kude kube sekupheleni
Sikhetha ukhetho lwe-FMRadio
Sikhetha amaxesha esifuna ukumamela kuwo
Sele simamele unomathotholo
Eyona ngxaki iphambili kolu khetho kukuba ukuba siyaphuma kwiscreen, ukudlala kuya kuphazamiseka. Kodwa ngapha koko sinokuyonwabela Umsakazo we-FM kwiXiaomi Mi A1 yethu ngendlela elula.
Ukutshintsha uxinano kuthetha ukuba ubungakanani bomxholo oboniswe kutshintsho lwescreen. Emva koko sinokubona umxholo ongaphezulu okanye omncinci kuxhomekeke kwisigqibo esigqibileyo. Ukuze senze oku kufuneka yiya kuseto emva koko uye kwiscreen. Apho, sinethuba lokuba ukwandisa okanye ukunciphisa uxinano.
Ngokunciphisa uxinano, umxholo ongaphezulu unokubonwa kwiscreen. Ukuba into esiyenzayo ukuyonyusa, yonke into iya kujongeka inkulu kwaye kuya kuba lula ngakumbi ukuyifunda. Kuxhomekeka kukhetho lwakho ukukhetha ukhetho olunye okanye olunye.
Funda indlela yokufaka Izihloko zeXiaomi kwi-smartphone yakho ukuze uyenze ngokwezifiso ngokupheleleyo.
Le yile Ukukhetha kwethu ubuqili ukufumana okuninzi kwiXiaomi Mi A1. Siyathemba ukuba la maqhinga aluncedo kuwe. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Awona maqhinga aphezulu eXiaomi Mi A1
Kwaye ukwazi ukumisela into yesikrini esingelilo ivolumu kunye nokucofa iqhosha ??
Mvakwemini, ndithenge iXioami Mi A1, kwaye ndonwabile. kodwa ndinengxaki ukungcangcazela kubuthathaka kakhulu, ngaba ikhona indlela yokunyusa amandla ombane. usetyenziso oluthile oluyisebenzisa.
Enkosi nosuku olumnandi.
Ndine-A1 kwaye ndiyivula ngeminwe kunye nepini, nangona kunjalo ngokufikelela ngokuthe ngqo kwekhamera kunokuvulwa ngaphandle kwesidingo somnwe okanye ipini
Eyonaapps ilungileyo yokuhlela iaudio kwi-Android